Mụbaa Blog okporo ụzọ site na ịtụte akwụkwọ ochie Blog | Martech Zone
Ọ bụ ezie na m na-eru nso 2,000 blog posts na Martech Zone, ọ pụtaghị na ndị niile na-arụsi ọrụ ike m wụsara ọ bụla post na-ghọtara. Ọ bụ mmadụ ole na ole ghọtara ya, mana ọ bụ is enwere ike ịtụte ihe ochie blog posts ma nweta okporo ụzọ ọhụụ.
Izu a, ngwaahịa ohuru kụrụ ahia nke dị egwu maka iweghachi akwụkwọ ochie. (A pụkwara iji ya na ibe weebụ, kwa, n'ezie). SEOPivot na-enyocha peeji nke saịtị gị ma nye gị aro iji tinye mkpụrụokwu maka nchọta igwe nchọta kacha mma. Ọ bụ ezigbo ngwaahịa, etinyekwara m ya na blọgụ nke m.
n'ihi na $ 12.39, you nwere ike iji SEOPivot maka ụbọchị 1 - karịa oge zuru ezu iji banye na ngalaba 100 wee nweta ndepụta zuru oke nke peeji 1,000 na isiokwu na ahịrịokwu. Nwere ike ibudata nsonaazụ site na Excel Spreadsheet!
Naanị m depụtara ndepụta site na Url na Nkezi olu… nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọchụchọ maka isiokwu ma ọ bụ ahịrịokwu enyere. M wee dezie peeji nke ọ bụla ma ọ bụ nke ọ bụla, tinye njikọta isiokwu ebe enwere ike, wee bipụta ya. Ọ dị mfe na ịnwere ike ịnwe mmetụta dị ịrịba ama na okporo ụzọ.
Ọ bụ nnukwu ngwaahịa na ụzọ dị mma iji tụgharịa ụfọdụ ọdịnaya ochie nke ị tinyeworo ike itinye ebe ahụ!
Tags: 3ikike.netN'ikensonaazụ azụmahịaakwụkwọ nyocha engineUsoro ịzụ ahịa twitteratụmatụ twitter
Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ekwentị na-ere ọkụ
Jul 11, 2009 na 10: 08 AM
Anọ m na-eleba anya na ngwaahịa a. Agbanyeghị, echere m na ị nwere ike nweta nyocha kacha mma nke arụmọrụ weebụsaịtị gị site na iji nchịkọta na ịzụta nzacha nyocha nke isiokwu gị na ngwa adwords keywords na egwuregwu zuru oke. Agbanyeghị, echere m na ngwaahịa a ga-adabara onye nwe blọgụ onye chọrọ ịbawanye ndepụta isiokwu yana enweghị oge iji mee nyocha KPI nyocha isiokwu.
Jul 11, 2009 na 5:12 PM
I agree re: isiokwu analysis, Tie mkpu S Adwords is great. Ngwaahịa SEOPivot nwanne SEMRush bara oke uru - ọkachasị na obere olu, mkpụrụokwu ogologo ọdụ. Adwords abaghị uru na obere olu, okwu dị oke mkpa mgbe ụfọdụ.
Ghotara isi okwu m - maka ịchekwa ụfọdụ ederede gara aga ma nweta mmụba mara mma n'okporo ụzọ, ibudata akụkọ SEOPivot dị ngwa ma dịkwa mfe!
Jul 29, 2009 na 2:53 PM
Daalụ nke ukwuu maka nyochaa! Obi dị anyị ụtọ ịhụ na ngwa anyị bara uru maka ndị ọkachamara 🙂 Ga-aga n'ihu na-emepe ọrụ ahụ ma nwee olile anya na ọ ga-adịkwu mfe ma baa uru.
Nov 16, 2009 na 5:01 PM
Akwa post. You ga-eche ma ọ bụrụ na m dere obere edemede na mmụba m na ebe nrụọrụ weebụ na mgbasa ozi blog banyere nke a?
My blog bụ ka nnọọ ọhụrụ otú ahụ ka m mgbe niile na-achọ iji nweta ihe mma ọdịnaya na ya.
Ndị na - agụ akwụkwọ m ejiri n’aka na m ga - erite uru na ozi a. M ga-n'ezie ejikọta azụ a blog
dị ka blọọgụ mbụ ebe m nwetara ozi si.
Feb 18, 2017 n’elekere 5:45 nke abali
Akwa post Douglas. Site na omume ugbu a na ịmegharị ọdịnaya ị ga-anọrịrị n'ihu usoro a na-atụle na ị dere post a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 7 afọ gara aga. Achọpụtara m ahrefs kachasị mma na otu ihe ngwọta ụbọchị ndị a maka nyocha isiokwu.
Feb 18, 2017 n’elekere 11:18 nke abali
Kpamkpam. Ahụghị m uru ọ bụla maka ndị na-ege anyị ntị na ịnwe ihe ochie, ederede na-ezighi ezi na saịtị ahụ. Ana m agbalị idebe ihe niile m nwere ike imete. Anụbeghị m ihe ọ bụla ma ọ bụghị nnukwu ihe banyere ahrefs!